Keadaan TG Nik Aziz Stabil, Bukan Islam Turut Doakan Kesejahteraan Beliau
The reception at Gelang Patah
မင်္ဂလာပါ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေ
Death on the Dangerous Highway
မိတ္ထီလာမြို့ပြန် မင်္ဂလာဇေယျုံ ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် စကားစမြည် ပြောဖြစ်ခြင်း
Vote Pakatan! M'sia the 12th country to legalise gay marriage
အစွန်းရောက်သူများ (သို့) ကလေးဆိုးကြီးများ အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံတော်
Maggie Thatcher's Funeral On Wednesday at approximately 6pm Malaysian Time
Posted: 14 Apr 2013 11:02 AM PDT
semua hormat beliau
Posted: 14 Apr 2013 07:30 AM PDT
Tonight somewhere at the Gelang Patah parliamentary constituency. Looks very encouraging but how will this crowd translate into real votes come5April 2013?
Posted: 14 Apr 2013 07:07 AM PDT
ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၁၃ M-Media တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ – ဆူးထက်
M-Media – မြန်မာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတွေမှာ သက်စွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးတွေ ၊ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမူတွေမှာရော မြန်မာပြည်ဖွား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါလား။
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c0.153.843.403/p843x403/525255_524784954230646_1041518283_n.jpg&#8221; width="542″ height="259″ />
Posted: 14 Apr 2013 06:47 AM PDT
ပြီးတော့ 'ခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့မြေ'ဆိုတဲ့ စာတမ်းပါတဲ့ စတစ်ကာအပြာရောင်လေး ၂-ခုကို ကျွန်မတို့ကို ပေးပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့အတူ ၀င်လာတဲ့ ကားမောင်းတဲ့တစ်ယောက်က လုံခြုံရေးကို စာရွက်စာတမ်းပြပြီး စကားပြောနေစဉ်မှာပဲ ကျွန်မလည်း ဒုက္ခသည်တချို့နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။
"ဒီထဲမှာ လူဦးရေစုစုပေါင်း ၁၃၇၄-ယောက်ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်စုက ၃၇၅-စုရှိတယ်။ ဒီမှာက ရပ်ကွက် (၇)ခုက လူပေါင်းစုံတယ်။ အားလုံးက မွတ်စလင်မ်တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အိမ်ထောင်စု ၁-ခုတော့ရှိတယ်။ သူတို့ကလည်း မပြန်ချင်လို့ မပြန်ကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာနေရတာ စားသောက်ရေးက ပြည့်စုံနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုးပဲ နေနေရတာတော့ မနေချင်တော့ဘူး။ အိမ်ပြန်ချင်တယ်။ အိမ်ကိုလည်း သွားပြန်ကြည့်ချင်သေးတယ်။ ဒီမှာက တစ်နေကုန် ဘာမှလည်း မလုပ်ရ။ ဘယ်မှလည်း မသွားရ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒီထဲမှာပဲ နေနေရတာ။ မနေချင်တော့ဘူး။"လို့ ပြောပြတယ်။
ကျွန်မလည်း အဲဒီနားကနေ ခဏထွက်လာရင်း အိမ်ထောင်စု တစ်စုတည်းရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုနဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ "ကျွန်မတို့လည်း မွတ်စလင်မ်တွေနဲ့အတူတူ ပြေးလွှားရင်း ဒီကို ရောက်လာတာပါ။ ကျွန်မတို့က ၀န်ဇင်းရပ်ကွက်ကပါ။ တစ်ခြားကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့လည်း လာခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ဒီမှာနေရတာလည်း အဆင်ပြေနေတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီကနေ မပြောင်းပဲနဲ့ နေနေတာပါ။"
'ခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့မြေ'ဆိုတဲ့ စတစ်ကာလေးတွေကို ဆိုင်ကယ်တချို့၊ ကားတချို့မှာ ကပ်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်။ တကယ်ရော ခွင့်တူညီမျှပြီး ၀ါဒဖြူစင်တဲ့မြေ ဖြစ်ပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်တဲ့ နယ်မြေတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ရပါမယ်။ ဘာသာတစ်ခုကိုတော့ လွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အ၀ပေးထားပြီး အခြားဘာသာတစ်ခုကိုတော့ လုံခြုံရေးကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ထားထားတာကိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ ခွင့်တူညီမျှတယ်လို့ မခံစားနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် တကယ့်ကို "ခွင့်တူညီမျှ ၀ါဒဖြူစင်တဲ့မြေ" အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ မိတ္ထီလာနယ်မြေ ဖြစ်လာဖို့ နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး ကြိးစား အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။
But we need the UN, US and EU's protection to continue supporting Daw Suu led NLD.
But they don't want our support but to destroy the support of NLD only by the Monks led 969 Ultra-nationalists.
After learning the Bigot ex-MI General Ye Myint's words I give up hope on U Thein Sein, until and unless he remove that idiot from that position of PM of Mandalay Division.They don't care about us. They thought that if they suck Obama and polish the shoes of the West with Islamophobic rhetoric they could smoke shield the world opinion.
But now at least some (a few only now) of the real democratic Myanmars realized that 969′s atrocities could ruin the good image of Buddhism. Not only the Christian West but Muslims are behind Muslims of Myanmar. Now there is no choice but U Thein Sein must take action on those MASS-MURDERERS.
Roll your mouse over any of the 24 vertebrae in the human spine.
Thanks to Angela who shared this information.
Posted: 14 Apr 2013 08:17 AM PDT
"Ya, Muhammad akan sertai kami," kata pemimpin tertinggi veteran itu kepada The Malaysian Insider.
"Beliau sudah mendekati beberapa pemimpin utama ketika ini.
"Ini agak signifikan buat kami, ia satu kelebihan walaupun dosa lampau dan kesalahan yang dilakukannya dahulu."
Posted: 14 Apr 2013 02:42 AM PDT
I pulled this picture off my friend's whatsapp today. Just look at the crowd of volunteers outside the DAP Penang headquarters building in Rangoon Road, Penang. Red t-shirts, yellow t-shirts, green t-shirts. This is volunteer work at its best, all done willingly; nobody's getting paid, unlike the other side. Guess everyone is now gearing up towards the General Elections on5May 2013. Have you decided who to vote for? I have....
Posted: 14 Apr 2013 04:42 AM PDT
Birds of the feather. Sri Lanka monks are Bigot Terrorists committing Atrocities on Tamil Hindus and Tamil Muslims. Un had already reported about the Sri lanka Buddhist government's GENOCIDE on Tamil Hindu LTTE.
969 සංවිධානයේ නිර්මාතෘ "වීර තු" ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ එම සංවිධානයේ ඉහල පෙළේ සාමාජිකයන් පිරිසක් මැයි මස ලංකා ධරනීතලයට පා තැබීමට නියමිතය.
ලෝකය පුරා විවිධ රට වල සිදුවන මුස්ලිම් අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් වලට එරෙහිව නැගී සිටීමට අදහස් කරන උන් වහන්සේ සිය ප්‍රථම සහෝදර සංවිධානය ලෙස මෙතෙක් කලක් අප්‍රකටව පැවති "අසිපත" සංවිධානය ලංකාවෙන් තෝරා ගෙන ඇත.
Posted: 14 Apr 2013 04:48 AM PDT
Posted: 14 Apr 2013 02:19 AM PDT
Source: Boke Boke
A blog that I enjoy reading is Discourse in C#minor at this link. The authoress isadeep thinker who writes with much sincerity and feeling. Honestly, I wish I could write like her. Humble about her abilities, her discourses are varied but interesting. Her latest post is about 'The Death of Marie Colvin' and I am reposting it this evening asatribute to the late journalist from the UK Sunday Times.
A little less thanayear ago I wrote aboutanumber of women whom I admired over the course of March (Women's History Month). Two days ago, one of them, Marie Colvin was killed in Syria where she was covering the government-mandated slaughter currently taking place there. This is what I wrote about her in 2011. The whole post is here, if you're interested.
Marie Colvin isacorrespondent for the UK Sunday Times and has been one for over twenty years. She has covered conflicts in the Balkans, Chechnya, East Timor, Israel, Palestine, Iraq, and pretty much anywhere else things are blowing up. She was on CNN reporting from Libya last week. Though I can find tons of her work, I can't find any biographical profiles. This piece, written in 2000 for the American Journalism Review, and this five-year-old article from the New York Daily News are the best I could do. I love her work because she goes places few will and stays after most leave. Such actions make good copy, but come with some with serious risk to life and limb. In 1999, Ms. Colvin lost her left eye while covering the Sri Lankan civil war in an incident which reads remarkably likeaset up. Her work has not gone without recognition. In 2010, Ms. Colvin won the British Press Award for Best Foreign Journalist of the Year.
I will always remember and admire Marie Colvin's courage and perseverance to report truth as it is. May she rest in peace always.
Posted: 14 Apr 2013 01:45 AM PDT
အခုည အီရှာ နမားဇ်ဖတ်ဖို့ ဗလီကိုသွားတော့ ဗလီအဆင်းမှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့လို့ စကားရပ်ပြောနေတုန်း မိတ္ထီလာ ဇေယုံကျောင်းက ကျောင်းသားတစ်ဦး ရောက်လာလို့ မိတ်ဆက်ရင်း သိချင်တာလေးတွေ မေးခဲ့တာကို ပြန်ပြောပြပါ့မယ်။
သူ့ကို ကျနော် မေးမြန်းဖြစ်တာက " ညီလေးတို့ကို ဆရာက ဘယ်လိုသွန်သင်ထားလဲ။ အခု ဦးဝီရသူက ဧရာဝတီ သတင်းဌာန နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ အာရဗီကျောင်းက ဆရာတွေက ကျောင်းသားတွေကို ဗမာတွေကို မြင်ရင် ရန်သူလို ကြည့်ရမယ်။ ရန်သူလို ဆက်ဆံရမယ်လို့ သင်ထားတယ်။
နောက်ပြီး ညီလေးတို့ကို ကယ်ထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ ညီလေးတို့ ကျောင်းသားတွေက အက်ဆစ်နဲ့ ပက်တယ်။
ဒါးနဲ့ ၀င်ခုတ်လို့ လူအုပ်စုက ဒေါသထွက်ပြီး ညီလေးတို့ကို အကြမ်းဖက်တာပါလို့ ပြောသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီလေး သိသလောက်လေး ပြောပြပေးပါ့လား။ " လို့ မေးမြန်းတော့ …..
`ကျနော်တို့ဆရာက ကျနော်တို့ကို အမြဲ အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် သွန်သင်တယ်။ ကျောင်းဝိုင်းက ပေ ၂၈၀ ကျယ်တယ်။ ကျောင်းထဲကနေ အပြင်ကို မုန့်ထွက်ဝယ်ဖို့ ခွင့်တိုင်ပြီး အပြင်ထွက်ရင် အင်္ကျီအရှည် မ၀တ်ရဘူး။ ဦးထုပ် (ဗလီဦးထုပ်) မဆောင်းရဘူး။ အပြင်ကို အမြန်သွား အမြန်ပြန်လာရတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့လည်း ပြဿနာ တစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေးပဲ။´`ကျနော်တို့ ကားနဲ့ အပြင်ကို ခရီးသွားရင် ဖြစ်ဖြစ်။ ဈေးထွက်ဝယ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုင်းကားပေါ်မှာ ကျနော်တို့ စီးရင် ဆရာက အမြဲမှာတယ်။ မင်းတို့က အွမ်မသ် (မွတ်စ်လင်မ်လူထု)ကို နောင်တစ်ချိန် ဦးဆောင်မယ့်လူတွေ။ မင်းတို့က စံပြဖြစ်ရမယ်။ ဘာသာခြားတွေကို လေးစားရမယ်။ ကားပေါ်မှာ ကျနော်တို့ကို နေရာလွတ်ရှိမှ ထိုင်ခိုင်းတယ်။ ကျနော်တို့ ထိုင်နေတုန်း လမ်းကနေ ဘာသာခြား တက်လာရင် ကျနော်တို့ ထိုင်တဲ့ နေရာကို ထပေးဖို့ ပြောတယ်။ အဲဒီလို သွန်သင်တာ အကို။ နောက်ပြီး ကားပေါ်မှာ မုန့်စားခဲ့ရင်တောင် အဲဒီကျနော်တို့ စားထားတဲ့ မုန့် အမှိုက်ကို ကားပေါ်မှာ မချခဲ့ဖို့။ ကိုယ့်ကြောင့် အခြားသူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဖို့ ဆုံးမတာပါဗျာ။ ကျနော်တို့ ကျောင်းက ဆရာတွေက အရမ်းနူးညံ့တယ်။စကားပြောတာကအစ သိမ်မွေ့တယ်။ ဘာသာခြားတွေကို အဲဒီလို ကြည့်ဖို့၊ ဆက်ဆံဖို့ တစ်ခါမှ သင်မထားပါဘူး အကိုရာ။´`ပြဿနာဖြစ်တဲ့ ညက ကျနော်တို့ ပိတ်မိနေတယ်။ နောက်ပြီး အဆောက်အဦး တစ်ခုကိုကျနော်တို့ သွားပုန်းနေကြတယ်။ (ကျောင်းနားလေးကပဲ) အဲဒီ အဆောက်အဦးမှာ ကျနော်တို့ ရှိနေတာကို အပြင်က လူအုပ်က ညကတည်းက သိတယ်။ အဲဒီ အဆောက်အဦးမှာ ရဲတွေစောင့်ပေးတယ်။ မနက်ကျ ကျနော်တို့ ဆရာကြီး (ကျောင်းအုပ် မော်လာနာဆွလာဟွဒ်ဒီန်း) က အပြင်က လူအုပ်နဲ့ ညှိမယ်။ ကျနော်တို့ကို အပြင်ကို ပေးထွက်ပေး။ ကျောင်းကို ကြိုက်တာလုပ်။ လူတွေကို ထွက်ခွင့်ပေးပါလို့ ပြောပြီး ညှိတယ်။ မရဘူးအကို။ သူတို့က လူတွေကိုရော လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရဲတွေ အကာအကွယ်ယူပြီး ကျနော်တို့ အပြင်ကို ထွက်ဖို့ လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာတစ်ယောက် အရင်ဆုံး ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားတယ်။´အဲဒီမှာ ကျနော်က စကားဖြတ်ပြီးတော့ `ညီလေးတို့ ခုခံဖို့ မလုပ်ဘူးလား။ တုန့်ပြန်လုိ့ မရလိုက်ဘူးလား။´ မေးတော့ အဆိုပါ ကျောင်းသားလေးက `မရဘူးအကို။ ကျနော်တို့လက်ထဲမှာ အက်ဆစ်မပြောနဲ့ ဘာလက်နက်မှ မရှိဘူး။ ဘာမှမရှိတာကိုလည်း သူတို့သိတယ်။ အဲဒါကို သူတို့က အပြင်ကိုလည်း ထွက်ရော ထွက်တာနဲ့ ၀ိုင်းလုပ်ကြတာ။သူတို့အားလုံးရဲ့ လက်ထဲမှာ ဆိုင်ကယ် အိပ်ဇော ပိုက်တွေပါတယ်အကို။ ဆရာတွေရော ကျောင်းသား ကလေးလေးတွေ ရှဟီးဒ် ဖြစ်တာ။ အိပ်ဇောပိုက်နဲ့ အရိုက်ခံရလို့ များတယ်။ ကျနော့်မျက်စိရှေ့မှာတင် အဲလိုတွေ အရိုက်ခံရတာ။´အဲဒီလောက်ပြောပြီး သူ မျက်ရည်တွေ ၀ဲလာလို့ ကျနော် ဆက်မမေးတော့ပါဘူး၊ ဆက်ပြီး နားထောင်နိုင်ဖို့ ကျနော့်မှာ အားလည်းမရှိတော့ပါဘူး။
အမုန်းမြို့တော်မှ စိမ်းညို့ရှင်FB of ဟန်းဒရစ်ကင် Spy Ba Nyunt
Posted: 13 Apr 2013 10:10 PM PDT
Freedom... freedom... and more freedom!
That's what we will get if Pakatan Rakyat rules the country after the 13th general elections. They will not only give free education, free money, free underwears (oopssss!) and free-for-all streets demo, they will also fulfill promises for freedom of speech, freedom of expression and freedom of sex.
Most interesting, of course, would be gay marriage and the legalisation of LGBT.
So, vote for Pakatan Rakyat! We will become the 12th country to legalise LGBT and gay marriage. Ambiga, Marina, Anwar and others have fought hard for such 'human' rights, remember? So, it's going to happen.
And we will join the pool of 11 others, namely The Netherlands which voted to legalise gay marriage in 2000, Belgium (2003), Canada (2005), Spain (2005), South Africa (2006), Norway (2009), Sweden (2009), Iceland (2010), Portugal (2010), Argentina (2010) and Denmark (2012).
Countries where gay marriage is partly-legal are Mexico, Brazil and the United States.
On Friday, the French Senate voted to legalise same-sex marriage in the country, puttingalandmark bill on track to become law by summer.
However, Malaysia could well be ahead of France to notch the 12th spot if Pakatan forms the government immediately after May5polls and regulate it fast, leaving the 13th spot to France.
ဧပြီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၃ ဆောင်းပါးရှင်- မောင်သမာဓိ
Posted: 14 Apr 2013 02:06 AM PDT
Tingkat2B4 sedang mengatur strategi," kata sumber Umno kepada Harakahdaily lewat malam tadi.
"Pemillihan calon kali ini ialah pertembungan Mahathir dengan Rosmah Mansor.
Mereka juga ingin memastikan jumlah calon Umno yang menang adalah dari kem mereka," kata sumber itu.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan semua ketua sayap Umno tidak bertanding dan kesannya, berikut ialah jawapan sumber Umno tersebut: "Jika Umno betul berbuat demikian, Umno akan hancur secara dalaman.
"Saya tak pasti orang Tingkat2B4 sedang berfikir, tapi yang pastinya jika semua ketua sayap tidak bertanding, bersama dengan Chua dan juga Palanivel – BN akan hancur. Sebab itu Mahathir dan kroninya Samy Vellu dilaporkan seperti berminat bertanding," tegas beliau.
"Winnable itu main cakap saja. Winnable itu berdasarkan kesukaan Rosmah dan Mahathir. Mahathir dilihat cuba mencatur segalanya demi masa depan anaknya.
"Kita pun tak tahu apa beliau nak buat. Sekarang Mahathir kempen ikut skrip beliau sendiri – sehingga menyebabkan war room Najib kelam-kabut nak pertahankan kenyataan Mahathir," kata sumber Umno tersebut.
"Ada perjanjian," kata sumber Umno tersebut yang enggan mengulas lanjut. -HD
Posted: 13 Apr 2013 11:44 PM PDT
Latest details of the ceremony
Posted: 13 Apr 2013 11:05 PM PDT
Polis repot terhadap satu artikel yang ditulis oleh seorang bekas pemimpim negara.